Hernandez oo aan dib dambe u xiran doonin maaliyada Atletico Madrid inta ka dhiman xili ciyaareedka… (Maxay tahay sababta?) – Gool FM
(Yurub) 28 Maarso 2019. Bayern Munich ayaa Arbacadii shalay ku dhawaaqday inay lasoo saxiixatay daafaca kooxda Atletico Madrid ee Lucas Hernandez, kaasoo xiran doona maaliyada Bavarian-ka laga bilaabo xili ciyaareedka soo socda, kadib markii ay kula saxiixdeen aduun dhan 80 milyan euro.
Dhanka kale Bayern Munich ayaa sheegtay in Lucas Hernandez uu mari doono qalliin ka dib markii ay muujiyeen baaritaanadii caafimaad uu maray inay jiraan xanuuno dhanka jilibka midig ah.
Iyadoo ay arintaas jirto, wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Lucas Hernandez uu gali doono qaliin dhanka jilibka ah si uu kaga soo kabto dhaawaca uu qabo, kaa oo kasoo gaaray bishii Febraayo dhanka jilibka midg.
Wargeyska Isbaanishka ah ayaa tilmaamaya in daafaca bidix ee reer France uu ka maqnaan doono garoomada mudo aad u fog, taasoo la micno ah inuusan markale ku soo muuqan doonin maaliyada kooxda Atletico Madrid inta ka dhiman xilli ciyaareedkan.
Si kastaba Kooxda Bayern Munich ayaa si rasmi ah u shaacisay in Lucas Hernandez ay ka saxiixaty heshiis mudo 5 sano gaarsiisan uu ku joogi doono garoonka Allianz Arena.
De Gea oo wali ku adkeysanaya codsigii uu hor dhigay Manchester United, si uu u sii joogo garoonka Old Trafford